Madaxweyne Ibrahim Keita oo dib loo doortay doorashadii ka dha... | Universal Somali TV
Madaxweyne Ibrahim Keita oo dib loo doortay doorashadii ka dhacday Mali
Madaxweynaha dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa dib loo doortay isaga oo shanta sano ee soo aadan heyn doona xilka madaxtinimo sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan gudiga doorashada khamiistan maanta.
Doorashadan oo ay kor joogto ka ahaayeen xubno caalami ah ayaa waxaa hareeyay eedo ay mucaaradka ay u jeediyeen xukuumada oo ah in ay ku shubatay,tiiyoo ay jirto in degaanada qaar ay suura gal noqon weysay in ay dadweynaha ka codeeyaan kadib hanjabaad ka timid dagaal yahanada ku sugan waqooyiga Mali.
Mr keite ayaa helay 73, boqolkiiba taasi oo macnaheedu yahay in 67.17 uu aruursaday codadka hogaamiyaha mucaaradka Soumaila Cisse ayaa dhankiisa la yimid 32.83 boqolkiiba.
Dalka Mali oo ay ku nool yihiin 20 qowmiyadood ayaa sanadihii la soo dhaafay waxaa uu la daala dhacayay dhaqaale la,aan baahsan iyo falal amni daro oo is biirsaday.
Dagaal yahanada Al Qaacida ee ka dagaalanta waqooyiga mali ayaa la aaminsan yahay in ay sabab u yihiin dhaqaale xumada ka jirta mali iyadoo marar badan dalkaas ay horay uga dhaceen weeraro lala bartilmaameedsaday xukuumada uu hogaamiyo madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita.
Si kastaba ha ahaatee xubnaha mucaaradka ayaa horay u qaadacady doorashada waxaana ay sheegeen in xukuumada ay ku shubatay.
Kan-xigaWarbaahinta Mareykanka oo dhaleeceysa...
Kan-horeCongo oo soo saartay amar lagu xirayo...
43,608,677 unique visits